Apple inotangisa watchOS 4.1 yeApple Watch Series 3 | Ndinobva mac
Isu tatoyambira kuti mushure meiyo beta 1 vhezheni yeMacOS High Sierra yatanga masikati ano, mamwe mabhanduro e beta eOS dzakasiyana asvika. Mune ino kesi isu tine vhezheni itsva yeApple Watch yevanogadzira, iyo watchOS 1 beta 4.1.
Iwo manotsi eiyo nyowani vhezheni anowedzera akakosha data uye pakati pavo tinogona kuona mukana we teerera kutenderera mumhanzi kubva pawachi yako nekuwana Apple Music kana iCloud Library. Isu zvakare tine nhepfenyuro nyowani yekushandisa uye nhau paSiri.
Aya ndiwo matsva mawatchOS 4.1 beta kuburitsa manotsi ayo vagadziri vanogona kuisa:
mawatchos 4,1 anosanganisira nyowani maficha emushandisi wekupedzisira. Ndokumbirawo uedze izvi maficha panguva yeBeta uye utumire chero zvirevo kana zviputi pakuita kwavo kwakakodzera-
Mumhanzi kutenderera uye new Radio app
Nemawatchos 4,1, unogona kuteerera kumhanzi kubva chero kupi uye chero rwiyo rwatinaro paApple Music kana muICloud library. Iyo nyowani redhiyo app zvakare inokupa iwe mukana wekurova 1 Live kana chero Apple Music radio chiteshi uri kure nefoni kana Wi-Fi kubatana. Iyi vhezheni inokutendera iwe kushandisa Siri seyakavanzika DJ. Kana tango simudza, tinogona kukumbira Siri yemaitiro emumhanzi uye mubatsiri anozoiona.
Kunatsiridzwa mune zvakanangana zvakananga neiyo LTE modhi, uye iyi modhi haiwanike munyika medu parizvino. Ndinovimba munguva pfupi iri kutevera shanduko idzi uye tinokwanisa kunakidzwa newachi iyi yekuti kune vakawanda ndiyo chaiyo mhando itsva yeApple Watch. Parizvino, iyi beta iri mumawoko evanogadzira uye ichakurumidza kuwanikwa kune wese munhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa watchOS 4.1 yeApple Watch Series 3
Guta Island 3 mutambo unouya kuMac App Store